एमालेका चर्चित नेताले दिए राजिनामा, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
एमालेका चर्चित नेताले दिए राजिनामा, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। नेकपा एमालेका एक चर्चित नेताले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
नेकपा एमाले रुपन्देहीका चर्चित नेताले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। पूर्व कृषि राज्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता ओमप्रकाश यादव (गुल्जारी)ले शनिबार पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।
मायादेवी गाउँपालिका–६ शिवपुर मर्चवारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यादवले एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ को सह–इञ्चार्ज पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।
उनले पार्टीको साधारण सदस्यमा भने रहने बताए। नेता यादवले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचनमा भएका गतिविधिबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले प्रतिनिधि छनोटका क्रममा भएका गतिविधिको छानबिन र समीक्षा गर्न समेत नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
यादवले आफुलाई जिल्लामा काम गर्न पार्टी अध्यक्ष शिवराज सुवेदीबाट असहयोग भएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले जिल्ला पार्टीका अध्यक्षबाट आफूलाई असहयोग भएको दाबी गर्दै ३ महिनाअघि नै पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जानकारी गराएको पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिए।
एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुखमा उनको राजीनामा आएपछि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। एमालेको १०औँ महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विप्लवसँगको वार्ता सहकार्य गरिने पक्का भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग प्रचण्डले शनिबार खुमलटारमा भेट गरेका थिए।
भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘बिस्तारै परिवर्तनका एजेन्डालाई सुदृढ गर्ने, सहकार्य गर्दै एकतातिर पनि सोच्नुपर्छ भन्नेसम्मको समझदारी त हो, तर सहमति भैसकेको छैन।
प्रचण्डले विगतको सरकारसँग भएको तिीन बुँदे सहमति पछि पटक-पटक विप्लवसँग भेट हुने गरेको बताए। आज लामो समय गम्भीर कुराकानी भएको छ, तर भर्खरै एकता भैहाल्ने ठाउँमा पुगिएको छैनू, चुनावमा सहकार्य हुन्छ, यति चाहिँ पक्का हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी अनुदान फिर्ता नजाओस् भन्ने चाहेको बताए। अमेरिकी अनुदान एमसीसी पास गर्ने नगर्नेमा दलबीच एकता नभएका बेला उनले राष्ट्रिय समझदारीबाटै एमसीसी पारित हुने जिकिर गरे।
एमसीसीको ओरजिनल सहमति र त्यसपछिका सहमतिको बीचको अन्तरविरोधले समस्या देखा परेको होू, राजनीतिक दलबीचमा राष्ट्रिय सहमति गरेरै निकास निकाल्ने कोसिस हुनेछ,
अमेरिककाप्रति कुनै एलर्जी छैन। उनले छिटै अल पार्टी मिटिङ बसेर समस्या समाधान गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या अदालतभित्रबाटै हल हुनुपर्ने बताए।
गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकबाट चिन्ता व्यक्त गर्यौं, गम्भीरतापूर्वक अपिल गर्यौ। राजनीतिक दलले अदालतमाथि कुनै खालको दबाब, हस्तक्षेप गरेको कहिँ कतै नदेखियोस् भन्ने चाहना छ।
तेस्तै,सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा बिभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् ।भेटमा एमसीसी, संसदमा विचाराधीन विधेयक, जारी संसदको अवरोध खुलाउने विषय र संसदसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुने गरेको छ।
सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन पहल थालेपछि सभामुख सापकोटा दबावमा छन् ।तर, सभामुख सापकोटाले एमसीसी बजेट जसरी संसदबाट पास हुँदैन भन्ने गरेका छन्। सभामुखलाई पछिल्लो समय भेटेका एक नेताले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
संविधान र कानुनले मेरो भूमिका तय गरेकै छ। एमसीसीका विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रुपमा सहमत भएर आउनुस् न। दलहरु निर्णायक हुँदा मेरो अरु केही भन्नु छैन। एमसीसीको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्नेमा सभामुखको जोड रहँदै आएको छ।
होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखले प्रष्ट भन्ने गरेका छन्। नाराबाजी भइरहने र एमसीसी पास गर्ने भन्ने हुन्न । संसदमा भ्याकुम भएर बजेट पास गरे जस्तो एमसीसी पास हुन्न,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार सभामुख सापकोटाले छलफलहरुमा मुख्य गरी तीनवटा विषय राख्ने गरेका छन्, पहिलो- एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति, दोस्रो- एमसीसीमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको निरुपण र तेस्रो– संसदको अवरोध अन्त्य।
सत्ताका लागि र निर्वाचनमा जानका लागि दलहरु एकमत भएजस्तै एमसीसीको विषयमा पनि एकमत हुँदा राम्रो हुने सभामुखको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट एमसीसी पास गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन्।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। त्यसैले पहिले संसद खुलाउनुपर्ने हुन्छ। संसद खुलाउने विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टाछुट्टै छलफल आयोजना गरे पनि एमाले अनुपस्थित हुने गरेकाले सहमति जुटेको छैन।
एमसीसीको विषयमा बाहिर बहस धेरै भए पनि संसदमा प्रवेश गरेको छैन। त्यसैले संसदको अवरोध खुलाउनुपर्नेमा सभामुखको जोड छ। केही दिन अगाडि सभामुखसँग छलफल गरेका संसदीय कानुनका एकजना जानकारले सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषयमा प्रश्नहरु उठेका छन् त्यसको जवाफ दिने संसद हुन पर्दैन ? यसमा दलहरु सहमत हुनुपर्दैन ? संसद खोल्नु पर्दैन ?एमसीसीका विषयमा दलहरु तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने सभामुखको भनाइ रहेको उनले बताए।